ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုကနေ လှည်းတန်းကို အလုပ်လာဆင်းတဲ့ သမီးလိမ္မာလေး အလုပ်ကအပြန်မှာ ကုန်တင်ကားတိုက်လို့သေ - Cele Platform
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇွန်လ (၄) ရက် ယနေ့ည( ၈) နာရီ ( ၁၅ )မီးနစ် အချိန်ခန့်က ယဉ်တိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပွား……. ဖြစ်စဉ်မှာ အတိုက်ခံရသူ မရွှေရည်ဝင်း ဆိပ်ကြီခနောင်တိုမြို့နယ်နေသူသည်လှည်းတန်းတွင် နေ့စဉ်အလုပ်လာဆင်းနေကြဖြစ်ပြီး အလုပ်သိမ်း၍ ဒလဘက်ခြမ်းသို့ ပြန်ရန် သခင်မြပန်းခြံ ကားမှတ်တိုင်တွင်ဆင်းကာ လမ်းလျှောက်ပြန်လာပြီးသခင်မြပန်းခြံအနီး YBS 58 ကားဂိတ်နောက်ဘက်
ကွန်တိန်နာကားကြီးများ ပြေးဆွဲမောင်းနှင်နေသည့် လမ်းမကြီးအား လမ်း ဖြတ်ကူးရာ ကီလီ/မော်တင် ဘက်သို့ဦးတည်မောင်းနှင်လာသည့်ကွန်တိန်နာ ကားဖြင့်တိုက်မိပြီး နေရာတွင်ပွဲခြင်းပြီးသေဆုံး သွားကြောင်း ကနဦးသတင်းရရှိ……….
Htun Lin Aung(SH)
ဆိပျကွီးခနောငျတိုကနေ လှညျးတနျးကို အလုပျလာဆငျးတဲ့ သမီးလိမ်မာလေး အလုပျကအပွနျမှာ ကုနျတငျကားတိုကျလို့သေ
၂၀၁၉ ခုနှဈ ဇှနျလ (၄) ရကျ ယနညေ့( ၈) နာရီ ( ၁၅ )မီးနဈ အခြိနျခနျ့က ယဉျတိုကျမှုတဈခုဖွဈပှား……. ဖွဈစဉျမှာ အတိုကျခံရသူ မရှရေညျဝငျး ဆိပျကွီခနောငျတိုမွို့နယျနသေူသညျလှညျးတနျးတှငျ နစေ့ဉျအလုပျလာဆငျးနကွေဖွဈပွီး အလုပျသိမျး၍ ဒလဘကျခွမျးသို့ ပွနျရနျ သခငျမွပနျးခွံ ကားမှတျတိုငျတှငျဆငျးကာ လမျးလြှောကျပွနျလာပွီးသခငျမွပနျးခွံအနီး YBS 58 ကားဂိတျနောကျဘကျ
ကှနျတိနျနာကားကွီးမြား ပွေးဆှဲမောငျးနှငျနသေညျ့ လမျးမကွီးအား လမျး ဖွတျကူးရာ ကီလီ/မျောတငျ ဘကျသို့ဦးတညျမောငျးနှငျလာသညျ့ကှနျတိနျနာ ကားဖွငျ့တိုကျမိပွီး နရောတှငျပှဲခွငျးပွီးသဆေုံး သှားကွောငျး ကနဦးသတငျးရရှိ……….